R.D. Kongo: Mpanao fahagagàna, Lalomena mpiangaly mozika ary Takamoa mampahatahotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 3:05 GMT
Angamba ny bilaogy kongoley mahaliana indrindra dia ilay an'i Cédric Kalonji , izay ireo sary sy fanehoankevitra feno hanihany sy indraindray alahelo ao anatiny dia vavolombelon'ny fahasahiranana isanandro iainana ao Kinshasa, renivohitra be mponina sy rota ao amin'io firenena io.
Rehefa tafaverina avy amin'ny diany tany Eoropa, manontany tena i Cedric raha toa ka tsy iray amin'ireo singa maro mandrafitra ny olana ankapobeny midadasika kokoa, anatin'ireo fotoana misavorovoro ny talenta ananan'ireo Kongoley mba hahafahana miatrika ireo sedra.
Raha tokony hitroatra, raha tokony handà izay zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny, dia aleontsika mitady vahaolana vonjy tavanandro ary lasa lavitra isanandro isanandro isika….Manontany tena aho raha ho tafarina avy ao anatin'ny lavenony i Kongo indray andro any. Ankehitriny, tsy maintsy mitandrina rehefa miresaka lohahevitra sasantsasany. Lasa mampididoza ny fanokafana be loatra ny vava hiresaka ireo zava-marina sasantsasany. Ny aina no manefa.
Tonga saina amin'ny fitomboan'ny mpamaky azy, nanomboka tamin'ny lahatsoratra iray navoaka momba azy tao amin'ny gazety Le Monde, mampanontany tena an'i Cédric ny fomba tokony hataony mba hisoloana tena ny firenena ao anatin'ny bilaoginy.
Ibabohako fa indraindray aho mamoaka zavatra izay tsy handeha ao amin'ny fireneko, saingy ao amin'io bilaogy io, ny firesahana ny zavatra iainako manokana isanandro vaky ao amin'io firenena io ihany no ataoko, arakarak'izay mahametimety ahy amin'izay andro sy fotoana izay. Tsy handeha hikarokaroka atsy sy aroa mba hitady izay tsy mety ary tsy mandeha mikaroka vaovao. Izay rehetra soratako dia niainako manokana.
Ohatra fotsiny, nahafantatra endrika namana iray niray sekoly taminy tany amin'ny garabola i Cédric, tao anaty afisy fampahafantarana ny tafika masina lehibe iray mba hanapariahana ny filazantsara sy ireo fanasitranana mahagaga’. Tsindriany tsara fa nandova avy amin'ny fiangonana sy ny asa fandraharahàna nataon'ny rainy ilay namany. Naneho hevitra momba io lahatsoratra io i Hélène, vehivavy kongoley iray monina any Kanadà, ary milaza ny hasosorany ao amin'ny bilaoginy Congo Connect :
Mba marina! Lasa aiza ny fahaizan'ny vahoaka kongoley mandanjalanja? Nahoana izy ireo no manohy mino an'ireny mpisandoka marobe milaza ny tenany ho pastora sy mpaminany ireny. Raha tokony ho ny fanahin'ny fizakantena no toriany, ny paosin'ireo mahantra indray no loaran-dry zareo ho takalon'ny fampanantenany fahagagàna, asa, vady, harena, fitsangantsanganana any Eoropa…
Iray amin'ireo feo tsara indrindra ao Afrika. Sary: Atamato (WildlifeDirect)
Ilay tarika tsy voafolaka misy ireo Congo Rangers [Ang] no manohy mampahafantatra antsika ireo fandaharanasa fiarovana ny tontolo iainana ao atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo. Avoakan'i Atamato [Ang] fa nohosorany anarana ireo lalomena izay ambany fanarahamasony, nomeny ny anaran'ireo goavana amin'ny mozika ao Kongo. Namoaka andiantsary ao amin'ny bilaoginy, Gorilla Protection [Ang] i Paulin, bilaogy izay maneho tsara ny loza mitatao amin'ny àla noho ny fanamboarana arina fandrehitra. Ary Jo Thompson [Ang] mizara ny tatitra nataony tamin'ny dia iray miavaka nitaingenany lakana misy maotera nitety ny renirano, namakivaky ireo faritra lavitra andriana, hizaha ireo Bonobos dia.
Nandritry ny alina, tonga tany amin'ny kilaometatra vitsivitsy miala an'i Kalopa izahay. Ren'ireo mponina tao am-bohitra ny feon'ny maoteran'ilay lakana tonga avy any an-drenirano ka dia nandositra nankany anaty ala ry zareo. Tena hafahafa be an! Fa na ahoana na ahoana aloha, nahazo ny morona izahay nony maraina ary milamina ny zavatra rehetra izao. Rehefa tonga izahay, ary hitan-dry zareo fa tsy loza mananontanona ho azy ireo ny fisianay, nanomboka nihira ireo vehivavy. Raha ny fahitàna azy dia toy ny nihira hoe : « Tonga i Dada, lasa ny hanoanana ». Somary tsy araka izay tena zavamisy ny fanantenan-dry zareo, mampahatahotra ahy izany.
Toy ny any amin'ireo vohitra rehetra, mihaza hena any ambany ravinahitra any ry zareo ary azo lazaina ho tsy manjono mihitsy. Ary toy ny ao Obenge, tonga miaraka amin'ny zavatra ilaina andavanandro ireo mpivarotra, avy eo mody miaraka amin'ny hena avy any anaty ravinahitra. Efa nanatrika fifanakalozana iray sahady aho androany !
Betsaka alika mpihaza eto ary feno ankizy. Adinoko foana fa tsy dia misy be antitra izany aty amin'itony toerana lavitra andriana itony. Maty tanora ny olona.
Tsy maintsy lazaiko ito : vao avy namelona ny vondrompihary herinaratra aho (groupe électrogène), fa tonga dia nandositra daholo ny ankizy. Tena raiki-tahotra fatratra ny fahitàna azy ireo. Mbola kaodikaody ihany koa ry zareo manoloana ilay takamoa narehitra. Tena efa ela loatra i Kalopa no nitoka-monina!
Faranantsika ity fitetezana vazantany ity, miaraka aminà andiantsary telo tena tsy misy itovizany. Ao amin'ny bilaogy Kivu Express , mpanao maritrano avy ao Quebec i Pierre, mampiseho antsika ilay làlana an-tendrombohitra tena tsara indrindra nefa koa sarotra eo anelanelan'i Bukavu, ao amin'ny Farihy Kivu, sy Uvira, ao amin'ny Farihy Tanganika. Rehefa tafaverina ao Kinshasa renivohitra, mientanentana ery i Danny Masson amin'ny fanehoana maroloko ny opéra iray ary i “Du Cabiau à Kinshasa” mampiranty ireo sarinà faneva mampahafantatra ny vahoaka izao zavatra rehetra izao…
…ny “bla-bla” farany nataon'ny Firenena Mikambana, ny fiverenan'ny olona iray mahalefaka hody an-tanindrazany, ireo famoriambahoaka hitady fahasitranana mahagaga na ny vidiny vaovao ho an'ny Coca-Cola… lamba aminà metatra vitsivitsy, mpanao sary hosodoko iray, mpanao tsingolobatita iray dia vita ny fampisehoana!